“အတွေးစလေးတွေ”: အကြမ်းပညာရှင်ရဲ့ တစ်နေ့တာ . . .( တက်ဂ်ပို့စ် )
Posted by Han Kyi at 4:35:00 am
ကလေးပီပီ အိုဗာတင်းသောက်လိုက် လူကြီးပီပီ ဘီယာလေးငုံလိုက် လုပ်ပြီး "နေ့လည်စာ"ကို ဟီလ်တန်ဟိုတယ်မှာ "ဒင်နာ" အဖြစ်တီးချင်တဲ့ ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ တက်ဂ်ပို့စ်က ဖတ်လို့ဖြင့် အင်မတန် ကောင်းလှပါကြောင်း။
ဒေသထွက် ပဲငပိကြော်ငြာကောင်းလို့ မြည်းချင်စိတ်များ တဖွားဖွား ပေါ်နေပါကြောင်း။
12 January 2012 at 05:08
:)... ဖတ်ရင်းပြုံးမိတယ်... ငေါ့တော့တော့လေး ထေ့ထေ့လေးရေးထားပုံက ပြုံးစရာရယ်..း)
ဆရာရေ့ ဆရာာအစားရှောင်တာလေး သဘောကျ
မိတယ် အနော်လည်း ထိုနည်း၎င်း ပဲ
အသီးဆို လက်သီး..အရွက်ဆို တံခါးရွက်.
ဒါတောင်မရှောင်ရင် ၀င်တိုက်သွားမှာ ဆိုးလို့.
အဲ့တာ (၀ယ်မစား)..တာပေါ့.း )
နေ့လည်စာကို ဒင်နာတီးတာက ကာရန်ကို ငဲ့လိုက်လို့ပါ မေဓာဝီရယ်...အဲဒီလိုမရေးဘဲ လန့်ခ်ျတီးမယ်ဆိုရင် ကာရန်ထောက်သွားပြီး ရှေ့ဆက်လို့မရတော့မှာစိုးလို့ သိသိကြီးနဲ့ ကြိတ်ထည့်လိုက်တာ ဆိုပါစို့...
မီးမီးကြောက်ကြောက်.....။ နောက်တာပါဆရာ။ ဆရာ့ရဲ့တနေ့တာကိုဖတ်ရတာ ပြုံးပျော်စရာလေးပါ...။ ဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေ...။
တဂ်ပို့စ်ကတော့ လန်ထွက်နေတာပဲ.. ဆရာဟန်တို့ရေးချက်များ ဖတ်ရင်းနဲ့ကို တဟိဟိနဲ့ ဖြစ်သွားတာပဲ.. ဟီးးးးးးးးးး
သူ့ကိုယ်သူ ကလေးတဲ့... သားသားတဲ့..
ဦးဟန်ကြည် ရေးရင် အမြဲ ပြုံးရတယ်။ အဲ့ဒီလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေ ရေးနိုင်ဖို့ ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်အခံကလည်း ကြည်လင်နေမှနော်။ ဆရာက အမြဲ စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်နေတယ် ထင်တယ်။ သြော်... ပို့စ်ခေါင်းစဉ် အကြောင်း ဒီလို ရှင်းပြထားတော့မှ နားလည်သွားတယ် "အကြမ်းပညာရှင်ရဲ့ တစ်နေ့တာ" ခစ်ခစ် :))
သားသားရဲ့ တစ်နေ့တာလေး ဖတ်သွားပါတယ် ..
ပခုက္ကူဦးအုန်းဖေ တစ်သက်သာ စာပေဆု ပေးသလိုမျိုး
ဂျယ်ရီပစ်ပစ် တစ်နေ့တာ ပို့စ်ဆု ပေးရင်တော့ ဆရာဟန်ကြည်တစ်ယောက်ကို မြင်ယောင်မိသေးတယ်။ ဆုကြီးတကားကားနဲ့။းဝ)
ဇနီးသည်က အနားမှာ မရှိတဲ့အတွက် ဇနီးသည် ပြန်ရောက်လာမှ ဒီ တစ်နေ့တာ ဆုကို တက်ယူမယ်လို့များ ပြောလေမလားဘဲ။း)
ကန်ဒီပိစိ ပြောတာလဲ သဘောကျတယ်။ ထိထိမိမိလေး ဆရာ့ကို ချီးကျူး ထောပနာ ပြုသွားတာလေ။ ဟာ ဟ။ ဒီပိစိက လူမရွေးဘူး ဆရာ၊ တဂျီးမင်းပါးကို လာလိမ်ဆွဲတာတောင် နှစ်ခိရှာ နှစ်ခါ ရှိရောပေါ့။း)
ဇနီးသည်ရော ပို့လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကော ချောချောမောမော လိုရာခရိး ရောက်နိုင်ပါစေလို့ ၀ိုင်းကူဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
ဖတ်ရင်းနဲ့ ပါးစပ်အလိုလို ဟမိသွားတယ်။ သူများကို အကြွင်းမဲ့ယုံဖို့ဆိုတာ မိုက်လွန်းတယ်လို့ ယူဆပါရဲ့...အဲဒါလေးကို သဘောကျတယ်။
အဲဒီ ကန်ဒီပိစိ ငပေါမလေး တစ်ကောင်ကို လွှတ်သာထားလိုက် သူကြီးရေ...သူနဲ့ ရွယ်တူတွေကို အနိုင်ကျင့်ရင် သူ့ကို ပြန်တီးမှာ ကြောက်လို့...လူကြီးတွေကိုပဲ လိုက်ပြီး အနိုင်ကျင့်နေတာ...
နောက်တစ်ခါ သူကြီးပါးကို လိမ်ဆွဲရင် တစ်ခါတည်း ကိုက်သာလွှတ်လိုက်...ပြီးမှပဲ ချက်ပတ်လည်ကို ဆေး ၁၄ လုံး ထိုးပေးလိုက်တာပေါ့..း)
တစ်နေ့တာမို့လို့ပဲ တစ်ပတ်စာသာဆိုရင် ပါးအကြော
ချိတ်သွားနိုင်ဖွယ်ရာရှိတယ် ဦးဟန်ကြည်ရေး)
တဂျင်းမီးကိုက်ရင် ချက်ပတ်လည်ကို ဆေး၁၄လုံး
း) ဆြာဟန်ရဲ့ ဒေးလီးလ်ပို့စ်ပေါ့နော့
အသီးထဲမှာ ပဒိုင်းသီး မီးသီး ဂေါက်သီး
အင်း အခုလို စစ်ကူပြောပေးတာကို ကျေးဇူးပါဆရာ။း( ကန်ဒီပိစိ အကြောင်း အသိပေးလိုက်ကာမှဘဲ ဆရာဟန်ကြည့်စကားအတိုင်း ကိုက်လွှတ်လိုက်ရင်တော့ မြင်ယောင်မိသေးတယ်။ ဆရာ့ဘလော့ပေါ်က အရသာရှိရှိဆိုတဲ့ အောက်က ပုံကြီးကိုး။ ခွီးးးးးးးးးးးးးးး
အော်... ပိစိ.. ပိစိ.. ဒါ.. ဒင်းကြောင့်.. တွေ့မှ ကိုက်လွတ်လိုက်ဦးမယ်။။ အဲလေ... ရိုက်လွှတ်ပစ်လိုက်ဦးမယ်။။။။။ (ပြောသာ ပြောရတယ်. ခပ်ကြောက်ကြောက်ရယ်.. မြန်မြန်လှစ်မှ..)
ကာဗီးယားငါးဥနဲ့ ဟင်နစီ ကို မြည်းချင်တဲ့ ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ နေ့ခင်းစာကိုဖတ်ပြီး ပြုံးမိနေကာမှ အစားချင်ဆုံး အစာကိုဆက်ဖတ်လိုက်တဲ့သကာလ ဝါဝါဝင်းဝင်း ရွှေအဆင်းလို လင်းလက်တောက်ပနေမဲ့ ဦးဟန်ကြည်တို့ဒေသထွက် ပဲငပိပြားကို မြင်ယောင်ရင်း အလိုလေး.. စားချင်စိတ်တွေ ယိုဖိတ် ထိမ်းလို့တောင် မရတော့ပါဘူး
ကာဗီးယားငါးဥတောင် ဒီလောက် မျက်စိထဲ မမြင်မိဘဲ ပဲငပိနဲ့ ဝက်သားချက်လေးကိုသာ သွားရည်တွေထွက်လောက်အောင် စားချင်စိတ် ဖြစ်မိပါကြောင်း ဆရာဟန်ရေ.. :)
အိုဗာတင်းကြိုက်တဲ့ သားသားညွှန်းတဲ့ ပဲငါးပိက ဘယ်အရပ်ကတုန်း
အချော ပညာရှင်ကြီး မဟုတ်ဘူးပေါ့....
တစ်နေ့တာကို သဘောကျမိပါတယ် ကိုဟန်ကြည်။ အစားတွေကို ရေးထားတာ မိန်းကလေးရေးတာလားမှတ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်အဲဒီလို ဖွဲ့နွဲ့ပြီးတော့ မရေးတတ်သေးဘူးဗျ။ ကြိုးစားရဦးမယ်။ အိုင်ဒီယာတွေကို သဘောကျမိပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ ရယ်စရာလုပ်ပေမယ့် ရယ်စရာဖြစ်ချင်မှဖြစ်တတ်တာဗျ။ ကိုဟန်ကြည်ကတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အကြည်တော်လိုင်းကို ရောက်နေပြီနော်။ ရယ်ရတယ်ဗျ။ အားပေးသွားပါတယ်။
သားသားရဲ့ပဲငပိက ဘယ်အရပ်ထွက်လဲသိပါရစေကွယ် ..
21 January 2012 at 07:38